Okpokoro kukumba Peptide Powder - Manufacturer Factory
Okpokoro Cucumber Peptide ntụ ntụ bụ obere peptides molekụl na-enweta site na hydrolysis na ịdị ọcha nke cucumbers n'oké osimiri site na protease bụ ihe ndị na-eme ka peptides collagen, yana neuropeptides, glycopeptide na peptides antibacterial.
Okpokoro kukumba Peptide Powder video
Osimiri kukumba Peptide ntụ ntụ nkọwa
Product Name Okpokoro kukumba Peptide ntụ ntụ
Agba Yellow ma ọ bụ ọchịchịrị edo edo
Gịnị bụ Okpokoro Cucumber Peptide ntụ ntụ?
Okpokoro Cucumber Peptide ntụ ntụ nwere ezigbo uru na ngwa ngwa ngwa ngwa na oke ojiji dị elu, ọ nwekwara ezigbo solubility, nkwụsi ike na obere viscosity.
Ka ọ dị ugbu a, a na-eji paụnd kukumba Peptide eme ihe maka nlekọta ahụike na ubi nri na-arụ ọrụ.
Kedu uru nke Sea Cucumber Peptide ntụ ntụ?
Okpokoro kukumba peptide ntụ nwere ike ime ka ntachi obi dịkwuo ike, na-akwalite imeju glycogen imeju, mee ka urea nitrogen metabolism dị ngwa, n'ihi ya, ọ nwere mmetụta ike ọgwụgwụ.
Okpokoro kukumba peptide nwere ike ime ka ikike nke mononuclear macrophages, sel mmiri na sel na-adịghịzi, si otú a na-eme ka ahụ dịkwuo mma nke ahụ mmadụ.
Na-egbu oge ịka nká ma mee ka ọ na-acha ọcha
Osimiri kukumba peptide nwere ọrụ mgbochi oxidation, nke nwere ike wepu ihe ikuku oxygen na-arụ ọrụ na radical hydroxyl, na-akwalite njikọta nke collagen na dermis. Ya mere, ọ nwere mmetụta nke igbu oge ịka nká. N'otu oge ahụ, peptide kukumba n'oké osimiri nwere ike igbochi mmepụta nke melanin n'ime sel ma nwee mmetụta dị ọcha.
Na-egbochi mkpụrụ ndụ kansa
Peptide kukumba nke mmiri nwere ọtụtụ ọrụ antibacterial ma nwee ike igbochi kansa kansa na mkpụrụ ndụ kansa kansa.
Peptide kukumba nke mmiri nwere ike ichebe mkpụrụ ndụ endothelial vascular nke mebiri site na lipid peroxide, nọgide na-arụ ọrụ ahụike nke mkpụrụ ndụ endothelial vas, ma belata ihe egwu nke atherosclerosis.
Okpokoro kukumba peptide nwere ike ime ka onu ogugu nke ACE na vivo ma belata angiotensin I, ya mere o nwere ike belata mgbali elu obara.
 Anti-ftigue mmetụta nke Obere Molekụla Arọ Oké Osimiri Kukumba Peptides on
 Mmetụta nke Osimiri Cucumber Peptide na ImmuneRegulation na mgbochi ike ọgwụgwụ Ike na ụmụ oke.
 Biochemical Propertiesand Collagen Peptide Arụ Ọrụ nke Oke Osimiri Cucumber Collagen.
 Comparative Studyon Mmetụta Nchedo nke Twodị Abụọ nke Okpokoro Cucumber Collagen Peptides na Vascular Endothelial Cells.
 Nchọpụta Ọganihu na Nchịkọta Nduzi nke Okpokoro Okpokoro Peptides.